कोरोना नियन्त्रणका लागि फेरि नयाँ नियम, के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइँदैन ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि आजदेखि नयाँ नियम लागू गरेको छ ।
लकडाउन अन्त्यपछि संक्रमण झनै बढेपछि सरकारले आजदेखि लागू हुने गरि नयाँ नियम लागू गरेको हो । जसअनुसार आजदेखि उपत्यकाका काठमााडौं, ललितपुर र भक्तपुर तथा दुई सय भन्दा बढी संक्रिय संक्रमित भएको जिल्लाहरूमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कोरोना संक्रमितको संख्यामा भारतले चीनलाई उछिन्यो
राति ७ देखि बिहान ७ बजेसम्म उपत्यका प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । राति ९ बजेदेखि बिहान ५ बजसम्म आवागमन समेत बन्द गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नाकामा कडाइ गर्ने, कोरोना जोखिम बढेको ठाउँलाई तुरुन्त बन्द गर्ने, होटल, रेष्टुरेण्टमा हुने सामूहिक भोज, पार्टी, सेमिनार र अन्य सामूहिक भेला निषेध गर्ने निर्णय भएको छ ।
जनस्वाथ्य मापदण्ड पालना गर्ने गराउने, मास्क नलगाउने वा जनस्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई दण्ड जरिवाना गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ट्याग्स: कोरोना, गृह मन्त्रालय